I-China Reusable Canvas Cotton Tote Bag ekwenziweni kunye neFektri | Ngqo
Uninzi lwabantu luyazi ukuba umqhaphu yenye yezona zinto zindala kumashumi eminyaka. Ke ngoko, kuthathelwa ingqalelo imeko yokhuselo lokusingqongileyo ngomqhaphu, umqhaphu yeyona nto ibalulekileyo yokwenza iibhegi xa kuthelekiswa neplastiki. Iingxowa zokuthenga ze-Canvas zinokuthotywa kwaye zinobungakanani bendawo yokuthenga engxoweni enokuphinda isetyenziswe kwakhona kunye nezinto eziphilayo. Ngokungafaniyo nezinye iiplastiki ezingenamaphepha kunye neengxowa zamaphepha, oku kuhlala ixesha elide.
Ukukhetha ibhegi yengxowa efanelekileyo ye-tovas kunokwenza ubomi bethu bube lula ngakumbi. Yintoni ekufuneka siyithathele ingqalelo xa uthenga i-canvas tote bag?
Okokuqala, kufuneka siqwalasele umbandela wengxowa yelaphu. I-Canvas lilaphu elityebileyo, elomeleleyo nelomeleleyo, ekungekho lula ukunxiba kwaye lihlala ixesha elide. Ukuqina kwayo kunye nokuqina kwayo kuphezulu kuneengxowa zokuthenga ezingalukwanga. Inamalaphu angaphezulu, izitayile zenoveli, kwaye akukho lula ukuyilungisa xa icociwe. Ezinye iibhegi zokuthenga ngelaphu zikwanemisebenzi emininzi efana nokufakwa ngaphakathi kunye ne-zipper, kwaye inokusetyenziswa njengobhaka.
Ubunzima bengxowa ye-canvas ngokubanzi yi-12A ye-canvas, efanelekileyo ngakumbi ngokobungakanani kunye nexabiso. Ukuba akukho mfuno ikhethekileyo, obu bungakanani bulungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla. Ukuba uneemfuno ezizodwa, unokukhetha iseyile ethe kratya.
Singazenza ngokwezifiso iibhegi zelaphu, ubungakanani kunye nesitayile, ezinokuhlangabezana neemfuno zabantu abaninzi. Kukho imibala emininzi enokukhethwa. I-Canvas tote ingasetyenziselwa kungekuphela njengeengxowa zokuthwala, kodwa kunye neebhegi zokuthenga, iibhegi zokwazisa, njl.
Ibhegi yethu ye-canvas yenzelwe ngeendlela ezahlukeneyo ezilula nezihonjisiweyo, izitayile zakudala. Kuye kwaqatshelwa ngokubanzi kwiimarike. Okubizwa ngokuba yiklasikhi okokuqala kuvavanyo lwexesha. Ukuba ibhegi ibizwa ngokuba yibhegi yakudala, Okokuqala, kufuneka ibe ikumgangatho ophezulu, inxibe into enganyangekiyo kwaye yomelele. Le yeyona nyaniso isisiseko.
Egqithileyo I-Eco Friendly Canvas Grocery Tote Bag
Umqhaphu weThayile yeTayile yeTayile
Umqhaphu weThayile yeTayile yeLaphu
Iibhegi zeThayile yeCotton Canvas